आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (भिडियो) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/आँसुले भात मुछेर खाइरहेका सञ्‍जीव आफैँसँग प्रश्न गर्छन्, ‘के भयो जीवनमा ? (भिडियो)
बसपार्कसमेत बनाइएको खुलामञ्‍चमा अपराह्न ३ बजे गाडी चढ्ने र ओर्लिनेहरूको भिडसँगै खाना खान आउनेहरूको पनि ठूलै भिड छ । त्यो भिडबाट कसैले अचानक सम्बोधन गर्‍यो, ‘सर मलाई चिन्‍नुभयो ?’ स्टकोट र ढाकाटोपी पहिरिएको, मुखमा मास्क, नाडीमा घडी र पिठ्युँमा झोला भिरेको मान्छेले दुई हात जोडेर नमस्कार गरे । नमस्कार गर्दै आफूलाई चिनाउन आउने व्यक्ति उनै सञ्‍जीव थिए ।
कोरोना महामारी नआएको भए सञ्‍जीव राई सायद होटेलको भान्सामै परिकार पकाइरहेका हुन्थे । सेतो ह्याट र एप्रोनमा सजिएर ग्राहकको इच्छाअनुसारका मेनु तयार गरिरहेका हुन्थे । तर, कोरोना महामारीले उनको जीवनमा नहुनुपर्ने भइदियो ।
जागिर खोसिएपछि उनले नयाँ जागिर पनि खोजी गरे । ‘होटेल, रेस्टुराँ सबै ठाउँ पुगेको हुँ । जागिर छैन भन्छन्,’ सञ्‍जीवले भने ।‘मलाई केही पनि चाहिएन, मेरो दिदीले बर्थ डे गिफ्ट दिनुभएको कालो कोट, पाइन्ट निकाल्न पाएँ भने मलाई कोठा पनि चाहिँदैन ।’ दिदीले दिएको कोट, पाइन्ट लगाएर मोबाइलमा खिचेको तस्बिर देखाए, सञ्‍जीवले ।
आँखाका डिलबाट पोखिन लागेको आँसु रोक्न उनले टाउको उठाएर आकाशतर्फ हेरे । यति गर्दा पनि केही थोपा आँसु मास्क छिचोल्दै गालातिर झरे ।
विनयजंगलाई अचानक के भयो, रातारात उपचारका लागि लगियो (भिडियो हेर्नुस्)